Xildhibaano ku dhaartay in aanay ansixin doonin Wasiiradan - iftineducation.com
Xildhibaano ku dhaartay in aanay ansixin doonin Wasiiradan
iftineducation.com – Xildhibaanno ka tirsan Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya ayaa ku goodiyay in ay ridi doonaan Xukuumadda cusub ee uu xalay soo dhisay Ra’iisal Wasaare Cumar C/Rashiid, waxayna taasi ku sababeeyeen in uu ra’iisal wasaaraha uga baxay ballan ay kala qaateen.
Xildhibaannadan ayaa ku doodaya in Ra’iisal Wasaaraha ay isku ogaayeen in uu soo dhiso xukuumad cusub oo aysan ku jirin Wasiirradii hore, wuxuuna ra’iisal wasaaraha soo dhisay gole wasiirro ah oo u badan kuwii hore.
Ra’iisal Wasaare Cumar C/Rashiid mar uu xalay ka hadlayay sababta uu u soo celiyay wasiirrada xukuumaddii hore wuxuu sheegay in uu go’aankaas u qaatay si aysan howlaha dowladda horyaalla ay habacsanaan ugu imaan, ayna wasiirradii hore sii wataan howlaha horyaalla.
Waxaa la eegi doonaan sida ay Xildhibaannada ka yeelaan xukuumaddan cusub oo Baarlamaanka la horgeyn doono si ay codka kalsoonida u hesho.
Gabar Nin walba U maleesa Ninkeeda Maseer dartiis -Sheeko funny ah
Markii ay maamadu baxdo sidaan ayaa dhacda DAAWO